I-China Auxiliary imishini yokusebenza kanye nabakhiqizi | UPijiang
Uhlelo lokuhlanza i-CIP lungakhiwa ngosayizi wemishini yobhiya.Uhlelo lokuhlanza i-CIP ikakhulu luqukethe ithangi le-yel, ithangi lokubonisa ukubulala amagciwane, iphampu yokuhlanza i-CIP nezinye izinto ezihlobene nalo.Lohlelo luhlangene, kulula ukululawula futhi lingahlanze ngempumelelo ku-- imishini yokukhiqiza indawo. Yonke inqubo yokuhlanza yenziwa ngendlela evaliwe, enciphisa kakhulu amathuba okungcoliswa kwesibili, ukuphepha okuqinile.
Uma umthamo wethangi mncane, ithangi lokuhlanza lingalungiswa kuma-trolleys. Kusebenza okulula ukuhlanza amathangi.
Idivaysi yohlelo lokupholisa inikezela kakhulu ngokubandayo okuqhubekayo kwesikhathi sokuphisa kanye ne-system Fermentation. Uhlelo lokupholisa lubandakanya ithangi lamanzi le-Glycol, uphiko lwe chiller, iphampu yamanzi nama-Glycol.
Umsebenzi wethangi lamanzi le-Glycol wenzelwa ukupholisa i-wort nokupholisa ubisi. Izinto eziphambili ezisetshenziswa i-SUS304 insimbi engenasici.
Ithangi lamanzi le-Glycol
Uyunithi we-Thi chiller
Uhlelo lokwakhiwa kwezindlu lusebenza kakhulu, kulula ukulusebenzisa futhi kulula ukulifunda ngenxa yomklamo walo onengqondo.Imishini eyinhloko iqukethe i-mash tun, ithangi lokuhambisa, iketela elibilayo, ithangi le-whirlpool, nethangi lokufaka imvubelo elamukele izindinganiso zekhwalithi yamazwe omhlaba zokuhlanza insimbi engagqwali.
Uhlelo lokwakhiwa kabusha lungahlanganiswa nomshini womkhumbi ohamba ngezikebhe ezimbili, indawo yokuthengisa ngemikhumbi emithathu kanye nezindawo ezine zokwenziwa ngomshini ngokuhambisana nezidingo zenqubo kanye nesilinganiso.Umthamo mkhulu, izikejana zingaphezulu futhi ungaphinde ukhethe ifomu lomhlangano wabadlali abaningi, uthuthukise ukusebenza kahle .
I-0.1T / H
Uhlelo lokuvutshelwa lubandakanya ithangi lokuvutshelwa kanye nethangi tank. Zonke izinto zetanki lokuvuthwa zenziwe ngensimbi engenasisekelo engu-304. Ikhwalithi iqinisekiswa ngezinto zokwakha zangempela nokuklama okusemthethweni nokwakha. Ukunikezwa amandla ngokwezidingo zamakhasimende, kusetshenziswa ukufafaza insimbi engenacala, i-matte, i-electroplating, ithusi nezinye izindlela. Amanodi ama-Manholes, ama-CIP wokuhlanza amabhola, amamitha e-liquid level, ama-sampling valves nezinye izakhiwo ezisekelayo seziphelele. Umklamo we-60 ° phansi ongaguquki ungakuthuthukisa ngempumelelo ukuhanjiswa kwemvubelo kabhiya. Kusetshenziswa ubuchwepheshe obusezingeni lomhlaba jikelele bokuqapha, idatha eku-inthanethi yesikhathi sangempela yokuhlola ikwazi ukuqaphela ukude.
Isisetshenziswa sokupholisa sihlinzeka ngokubandlulula okuqhubekayo kwesikhathi sokwakhiwa komkhumbi kanye nesistimu yokucwilisa. Uhlelo lokupholisa lubandakanya i-Chank Water Tank, uphiko lwamasizi kanye nama-valve.
Uhlelo lokulawula lwe-PLC